सोचेभन्दा धेरै शक्तिशाली हुन्छन् यी चार राशि,धन सम्पत्तिको पनि कमि हुदैन कहिले !! | सुदुरपश्चिम खबर
सोचेभन्दा धेरै शक्तिशाली हुन्छन् यी चार राशि,धन सम्पत्तिको पनि कमि हुदैन कहिले !!
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार, मानिसको जीवन उनको राशि अनुसार चल्ने गर्छ। कुन मानिसमा ग्रह नक्षत्रहरुको कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने राशि आफैले बताउने गर्दछ। यस आधुनिक युगमा हामी ज्योतिष शास्त्रको विश्वास गर्दैनौ, तर कतिपय समस्याहरु ज्योतिष शास्त्रद्वारा मात्र हल हुन्छ भने कतिपय त ज्योतिष शास्त्र बिना असम्भव नै हुन्छ।जो व्यक्ति जस्तो देखिन्छ, के वास्तवमा पनि त्यस्तै हुन्छ? यी प्रश्नहरूको उत्तर ज्योतिष शास्त्रबाट लिन सकिन्छ। मानिसको कुंडलीले जीवनको गोप्य कुराहरु पनि खोल्ने गर्दछ। आज हामी यी राशिहरुको एक महत्त्वपूर्ण बानीको बारेमा छलफल गर्छौ। हुनत ज्योतिष शास्त्रका अनुसार सबै राशिहरु आफ्नै तरिकाले महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तर ति मध्ये ४ राशि यस्ता पनि छन्, जो वास्तवमै निकै शक्तिशाली हुन्छन्।
यस्ता गुण भएकी श्रीमती भए श्रीमान् बन्छन् संसारकै भाग्यमानी !!
यी हुन् भगवान गणेशका ११ स्वरुप, कस्को पूजा गर्दा के लाभ मिल्छ ?
मेष राशिःमेष राशिलाई अरु राशिहरुभन्दा निकै ऊर्जावान मानिन्छ। यी व्यक्तिहरू सँधै सक्रिय हुने गर्छन् र केहि नगरि बस्न पनि सक्दैनन्। यदि कसैले उनीहरूलाई बोर गर्दछ भने उनीहरुले त्यस व्यक्तिको बेवास्ता गर्न थाल्छन्। मेष राशि भएका व्यक्तिहरु कसैलाई त्यति सजिलै विश्वास गर्दैनन् र आफ्नो गोप्य कुरा आफूसंगै राख्छन्। उनीहरु आफ्नो निर्णय आफै लिन्छन् र कसैबाट प्रभावित भएर आफ्नो जीवनको दिशा परिवर्तन पनि गर्दैनन्।
वृश्चिक राशिःवृश्चिक राशिका मानिसहरु निकै इमान्दार हुने गर्छन् तर उनीहरुमा द्रोही स्वभाव पनि प्रमुखताको साथ हुने गर्दछ। ईमानदार व्यक्तिहरुसंग यी राशिका व्यक्ति पनि निकै इमान्दार रहन्छन् तर धोका दिने व्यक्तिहरुका लागि भने यी राशि निकै खतरनाक सावित हुने गर्छन्। यी व्यक्तिहरु निकै भावनात्मक हुने गर्छन्, त्यसैले कहिलेकाँही उनीहरुलाई सहन निकै गाह्रो हुन्छ। वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूसँग भविष्यको सोच्ने एउटा छुट्टै क्षमता हुने गर्दछ, जुन तपाई कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न।
कुंभ राशिःभावनामा बगेर कुनै पनि निर्णय नलिनु नै कुंभ राशिको सबै भन्दा ठूलो विशेषता हो। यी व्यक्तिहरु आवश्यकता अनुसार, आफ्ना भावनाहरुलाई साइडमा राखेर अगाडि बढ्न सक्षम हुने गर्छन्। यी मानिसहरू निकै चाखलाग्दो र जिज्ञासु स्वाभावका हुने गर्छन्। उनीहरुलाई निकै बुद्धिमान पनि मानिन्छ। उनीहरु जिद्दी स्वाभावका हुनुका साथै आत्मविश्वासले पनि भरिएको हुन्छ।
मकर राशिःयस राशिलाई सबै भन्दा राम्रो तथा उत्कृष्ट राशि मानिन्छ, किनकि उनीहरु भित्र आत्म नियन्त्रणको भावना हुने गर्दछ। उनीहरुसंग अन्य राशिका व्यक्तिहरु भन्दा राम्रो सोच्ने तथा बुझ्ने क्षमता हुने गर्छ। यी व्यक्तिहरु सधैं सक्रिय रहने गर्छन्। यहि कारण हो कि, यी व्यक्तिहरू आफ्ना उद्देश्यहरु द्रुत रुपमा प्राप्त गर्न सफल हुने गर्दछन्। (gnewsnepal बाट सभार)
मंगलवार यस्तो काम गर्नुहोस् तपाईंको भाग्य चम्कनेछ !!
भगवान गणेशको दर्शन गरी हेर्नुस् आजको राशिफल,यी ४ राशिलाई आज धन लाभ हुनेछ !!
घरमा नराख्नु यस्ता ७ टुटेफुटेका सामान जसले बढाउँछ घरमा नकारात्मक उर्जा !!
एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित !!
नेपाललाई चीनले २० हजार थान अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग गर्ने !!
बैतडी जिल्लामा लकडाउन गर्ने सिडिओको संकेत !!